အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာ စာအုပ်များ | Save Burma
မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့၊ သဘောသဘာဝ၊ အရည်အသွေး၊ အနုပညာနှင့် ဗဟုသုတများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာတို့၏ အစဉ်အလာ ဂုဏ်သိက္ခာများကို လေ့လာ၊ အတုယူ၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်လျက် အင်တာနက်ပေါ်မှ ရရှိသော မြန်မာစာအုပ်များကို မူရင်းရရှိသည့်စာရင်းအတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စာအုပ်များကို အပင်ပန်းခံစွာ မြန်မာများအားလုံး မျှဝေခံစားနိုင်ရန်အတွက် ပေးပို့သူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရွှေစကားမှလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါမည်။ စာအုပ်များရှိပါက မျှဝေခံစားနိုင်ရန် myanmarchatadmin@gmail.comို.သို့ပေးပို့ ကူညီကြပါရန်။
Tagged with မြန်မာစာအုပ်
« Photographs and Timeline of General Aung San
World focus on Burma (31 January 2009) »
[…] Source -မြန်မာ စာအုပ်များ […]
မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ကျောင်းသားဘဝ « Save Burma
စာအုပ်တော်တော်များများ ဒေါင်းလုဒ် ယူသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲ အများကြီး တင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး စုဆောင်း နိုင်ပါစေ။
Thank you for your visit and downloading. Reading such Burmese books is good for knowledge and to maintain literature.
soe soe khaing
သိပ္ဗံမောင်ဝ၏၀ထ္ထုဆောင်းပါးများ(တချိန်က ၁၀ တန်းကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ် )ဖြစ်ပါတယ် ။ ၇န်ကုန်ဘဆွေ၇ဲ့မြန်မာပြည်သား ။ သေသော်မှတည့်အော်ကောင်း၏ ။သိန်းသန်းထွန်း၏ မပန်ပါနဲ့ကြွေချင်တယ် ။ အချစ်ဦးလေး၇ဲ့အချစ်ရူး ။ ငွေစပ္ပါယ်၇ဲ့လမင်းငယ်ဘ၀ ယခင်က ကျနော့်မှာ၇ှိပါတယ်။အခု၇ှာမ၇ှိတော့ပါ ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ်မောင်သုံည
ကျနော် ရှာကြည့်ပါဦးမယ်။ အခြားသူတွေလည်း ရှာတွေ့ရင် ပြောပေးကြပါ။
hi bro,how do u do?pls be do not mind me.i like to read alot of myanmar novels.but now,every site got same books and just same quantity.pls can bro do something diffrient?kindly,i hope myanmar have more than here.thanks for reading my mind.haveagood day.
Thanks for your comment. I will try again if I have time. But now, so busy.
စစ်ကိုင်းဟန်တင် ပြုစုသည့် ”မြန်မာနိုင်ငံ၏ မှတ်စုမှတ်ရာ စာတမ်းများ“ စာကို တင်ပေးစေလိုပါသည်။ ရောင်းလျှင်လည်း ကျွှန်ုပ်ဝယ်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးစေလိုပါသည်။
ရွှေဥဒေါင်း – ရတနာသိုက် အဲဒီစာအုပ်ကလေးလိုချင်ပါတယ်……
အကြည်တော်ရဲ့ လျို့ဝှက်သော ဘာဂိမ်း ဆိုလဲ အဲဒီစာအုပ်ကိုရှိရင် lunsian.ciin09@gmail.com ကိုပို့ပေးပါနော်
ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါတယ် နော်
ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ pdf ဖိုင်မှာလည်း Download လုပ်လို့မရပါ။ကျေးဇူးအထူးပါ။
Download ရပါပြီ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
အကို ကျွန်တော် ဆရာကျော်ဝင်း ရဲ့ သားရွှေဥ လိုချင်ပါတယ်…ဖြစ်
သားရွှေအိုး ထမ်းလာသည်ကို မြင်ရကိန်း (ရေး- ကျော်ကျော်စိုး)
Myanmar frees political prisoners after ASEAN pressure, then re-arrests some - Reuters October 19, 2021
Myanmar frees hundreds of political prisoners under regional pressure - NBC News October 19, 2021
In the wake of Burma's coup, new US legislation offersaroadmap for action | TheHill - The Hill October 6, 2021
Ethnic Minority Student Killed in Myanmar Junta Custody - The Irrawaddy News Magazine October 19, 2021
Op-Ed: Todd Young dropped his support forabill to help Burma. We'd like to know why - IndyStar October 11, 2021
Competing over climate: Myanmar’s valuable and climate-vulnerable geography - Brookings Institution October 18, 2021
Myanmar/Burma: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union to support the work of the ASEAN Special Envoy - Myanmar - ReliefWeb October 13, 2021
Myanmar Regime-Appointed Administrators Quit After Threats From Resistance - The Irrawaddy News Magazine October 5, 2021
Myanmar Military Struggles to Adapt to New Kind of Conflict - The Irrawaddy News Magazine October 18, 2021
Asian group takes Burma to task - Northwest Arkansas Democrat-Gazette October 17, 2021
Political Prisoners Freed by Myanmar Junta Rearrested on Same Day - The Irrawaddy News Magazine October 19, 2021
ASIA/MYANMAR - Synod of Bishops on Synodality: ForaChurch on the move under the sign of mission - Agenzia Fides October 19, 2021
Myanmar Junta Suffers Bloodiest Month with 1,562 Soldiers Killed: NUG - The Irrawaddy News Magazine October 8, 2021
New Crony Brokers Israeli Aircraft Parts for Myanmar Air Force - The Irrawaddy News Magazine October 19, 2021
Myanmar Junta Takes Family Member as Old as 94 Hostage - The Irrawaddy News Magazine October 5, 2021
Myanmar Military Detains North Western Commander for Planning to Defect: Ethnic Insurgent Sources - The Irrawaddy News Magazine October 7, 2021
Myanmar to free 5,000 protesters after ASEAN snub - 台北時報 October 18, 2021
Myanmar Junta Kills Dozens in Latest Surge of Violence Against Civilians - The Irrawaddy News Magazine September 27, 2021
Myanmar Regime Accuses Detained State Counselor’s Ex-Bodyguard of Incitement - The Irrawaddy News Magazine September 27, 2021
Myanmar Coup Leader Met by Protests in Kachin State - The Irrawaddy News Magazine September 21, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-19 13:01 October 19, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-19 01:01 October 19, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-18 13:01 October 18, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-18 01:01 October 18, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-17 13:01 October 17, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-17 01:01 October 17, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-16 13:01 October 16, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-16 01:01 October 16, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-15 13:01 October 15, 2021
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2021-10-15 01:01 October 15, 2021
Greta Thunberg 'Rickrolls' climate concert with crazy dance moves October 18, 2021
Three children killed in airstrikes on Ethiopia's Tigray region, UN says October 19, 2021
Haiti gang wants $17M ransom for kidnapped American and Canadian missionaries October 19, 2021
See emotional reunion as Myanmar frees anti-coup protesters October 19, 2021
China's economy is getting walloped by crises in energy, shipping and real estate October 18, 2021